Maitiro ekudzoreredza zviitiko zvakanyangarika kubva pakarenda yako | IPhone nhau
Wakamboedza kutsvaga chimwe chinhu pakarenda ukasachiwana? Kunyanya zviitiko zvakaitika mwedzi mishoma yapfuura uye izvo zvisingatarisike kwauri, kunyangwe iwe ukapika kuti wakazviisa mukarenda, uye izvozve hauna kumbobvisa. Uku hakusi kukanganisa neICloud, uye zvakare karenda reGmail harina kutamba hunyengeri pauri ne iPhone kana iPad yako Ziva chokwadi kuti hachisi kuti chiitiko chakadzimwa, asi kuti hachina kuratidzwa pacalende skrini, hazvina basa kana chiri chepamutemo kana chechitatu-bato kunyorera. Wakamboitika here? Iwe unoda kuziva kuti ungazvigadzirisa sei kana zvikamboitika kwauri? Zvakanaka ipapo zvese zvese.
Kwete, zvirokwazvo dambudziko harisi rekuti karenda rinobvisa zviitiko, kana kunyangwe iwe wakwanisa kuzvidzima nekutadza. Izvo zvinongova kuti nekutadza iyo iOS Calendar application inomira kuratidza zviitiko zvekare, asi ivo vachiripo, iwe hauna kurasikirwa chero data, ivo havatombooneka. Izvo zvinoitika nechero yechitatu-bato kunyorera iyo inosangana neiyo iOS khalendari, senge Fantastical 2, chandinofarira application muchikamu chino. Kana iwe uchida kuti zviitiko zvirege kumira kuratidza, ingo enda kuZvirongwa uye gadzirisa imwe yesarudzo dzayo.
Mune iyo Zvirongwa menyu, mune iyo "Tsamba, vanobatika, makarenda" chikamu chatinogona kuwana, tichidzika zvishoma zvishoma kuburikidza nemamenyu, sarudzo "Synchronize zviitiko". Ikoko tinokwanisa kugadzirisa kuti tinoda nguva yakareba sei kuti zviitiko zvekarenda zvigare pachiratidziri. Tinogona kusarudza pakati pemasvondo maviri, mwedzi mumwe, mwedzi mitatu nemwedzi mitanhatu, kana kuti zviitiko zvese zvioneke zvisinei nezuva ravo. Iyi ndiyo sarudzo yangu yekusarudzika nguva dzose, nekuti hazvimborwadzi kuziva pawakaita chimwe chinhu uye kugona kuchitsvaga zviri nyore pafoni yako. Dambudziko rakagadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekudzoreredza zviitiko zvakanyangarika kubva pakarenda yako
Mhoroi, zvese zvakaita sekutaura kwako, asi ini handiwani chero chinhu chakura kupfuura mwedzi gumi nemana mukarenda yeIOS. Zviitiko zvichiripo, uye kana ndikatarisa rimwe zuva makore maviri apfuura, zviitiko zvinoonekwa, asi kutsvaga hakuzviwane. Ndichaonga zvikuru rubatsiro rwako.
Mhoro kwandiri, zvisingaonekwe kwandiri ndizvo zvandanyora pazasi pezviitiko, LOCATION, ndanga ndiripo kuti nditaure nezvezviitiko ... ini ndinongoona avo kubva Sep 2016 zvichienda mberi. Vakwegura ini ndinongoona chiitiko asi kwete komendi yandakanyora panoti location? Ndinovimba munogona kundibatsira
Chinyorwa ichi chave chakandinakira, ndanga ndichipenga ndichitsvaga mukuru weApple rubatsiro zviwanikwa, zvisingaite kuti rubatsiro rwaApple harutsanangure kana rwunotsanangurwa zvakanyanya. Ndotenda zvikuru
Ini ndinogona chete kutsvaga, kana kuti, ini ndinongowana zviitiko kana kusarudzika zvakaenzana kana pasi pemwedzi gumi nemana ekuberekwa. Ini handizive chakakonzera. Zvinoitika chete kwandiri pane ios. Pane mac anopfuura makore gumi.
Mazuva ekuzvarwa akamira kuoneka paPadad neyekupedzisira kugadzirisa
Ivo vese vanoonekwa kwandiri kubva makore apfuura, asi basa rekutsvaga harina kuvawana.